ဒြပ်​မဲ့ ဗိုင်းရပ်​ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Creative Writing » ဒြပ်​မဲ့ ဗိုင်းရပ်​	7
Posted by naywoon ni on Mar 22, 2016 in Creative Writing, Drama, Essays.., My Dear Diary |7comments
ဒြပ်​မဲ့ ဗိုင်းရပ်​ ဗိုင်းရပ်​ လို့ ​ခေါ်ပြီးမှ အ​ကောင်​အထည်​မရှိဘူးလားလို့ မ​မေးလိုက်​ပါနဲ့ ။ အဲ့ဗိုင်းရပ်​ က အ​ကောင်​အထည်​မရှိပါဘူး ။ ပြီး​တော့ ဘယ်​ဓာတ်​ခွဲခန်းမှာမှ မရှာ​ဖွေနိုင်​ပါဘူး ။ အ​ကောင်​အထည်​မှ မရှိဘဲ ။ သို့​ပေမဲ့ ​နေ၀န်းနီ တို့အနီးအနားမှာ လူမှုကွန်​ယက်​​ပေါ်မှာက​တော့ အဲ့ဒိ ဗိုင်းရပ်​ ကူးစက်​ခံထားရသူ​တွေ ​တွေ့နိုင်​ပါတယ်​ ။ ဟုတ်​ပါတယ်​ ။အရက်​ ​ဆေးလိပ်​ မူးယစ်​​ဆေး စွဲသူ​တွေက ဖြတ်​ဖို့ ​ဆေးရုံ​ဆေးခန်းရှိပါတယ်​ ။ ကုသ​ပေးမဲ့ ဆရာဝန်​ သူနာပြုလည်း ရှိပါတယ်​ ။ ဒီဗိုင်းရပ်​ ကူးစက်​ခံရသူ​တွေအဖို့ ဘယ်​​ဆေးရုံ​ဆေးခန်းကမှ လက်​ခံကုမှာမဟုတ်​ပါဘူး ။ ဘယ်​ဆရာဝန်​ကမှလည်း ကုမ​ပေးနိုင်​ပါဘူး ။ ” ဒါ ​ရောဂါ မဟုတ်​ဖူး ” လို့ပဲ ​ပြောပါလိမ့်​မယ်​ ။ ဟုတ်​တယ်​​လေ ။ ဒီဗိုင်းရပ်​ အကူးစက်​ခံရသူဟာ နာဖျား​နေတာလည်း မ​ဟုတ်​ ။ ​အော့အန်​​နေတာလည်းမဟုတ်​ ။ သာမာန်​သူ​တွေလို လှုပ်​ရှားသွားလာ ​နေနိုင်​တာပဲ ။ အစားအ​သောက်​လည်း မပျက်​ ။ ဘယ်​ ECG အာထရာ​ဆောင်းမှာမှလည်း ​ပေါ်တာမှမဟုတ်​ ။ ဆရာဝန်​​တွေ ကုသနိုင်​တဲ့ ​ရောဂါမှ မဟုတ်​​ပေပဲ ။ စကား​ပြောကြည့်​မှ ဒီလူ ဒြပ်​မဲ့ ​ဗိုင်းရပ်​ ကူးစက်​ခံထားရတယ်​ဆိုတာသိသာတာ ။ ( မျက် ​စေ့လည်​ကုန်​ကြပြီ မဟုတ်​လား ဘာကို​ပြောချင်​လို့ သိုင်းဝိုင်း​နေတာလဲ စဉ်းစားမရဖြစ်​ကုန်​ပြီလား ငါကွ ​နေ၀န်းနီ ) ဒီဗိုင်းရပ်​ အကူးစက်​မခံရ​အောင်​ နိုင်​ငံ​တော်​ကို စီမံအုပ်​ချုပ်​​နေသူများကသာ ကာကွယ်​တားဆီး​ပေးနိုင်​ပါတယ်​ ။ ကူးစက်​ခံထားရသူ​တွေကိုလည်း အစိုးရကပဲ ကုသ​ဖြေရှင်း​ပေးနိုင်​ပါတယ်​ ။ ကုန်​လွန်​ခဲ့တဲ့ အစိုးရသက်​တမ်းမှာ​တော့ ဖုတ်​​လေတဲ့ငပိ ရှိတယ်​လို့​တောင်​ အထင်​မခံရရှာပါဘူး ။ အစိုးရနဲ့ သက်​ဆိုင်​ရာ ၀န်​ထမ်း တစ်​ချို့​ကြောင့်​ ဗိုင်းရပ်​က ပို​တောင်​အား​ကောင်းလာ​သေးတယ်​ ။ တခါတရံမှာ ​ဆေးမြီးတို ကုသချက်​​တွေဟာလည်း မီး​လောင်​ရာ​လေပင့်​ ဗူး​လေးရာ ဖရုံဆင့်​ ဆိုသလို ​ရောဂါတိုး​အောင်​ ဆွ​ပေး​နေသလို ဖြစ်​ခဲ့ရပါ​သေးတယ်​ ။ ​နောက်​လာမဲ့ အစိုးရ လက်​ထက်​မှာ​တော့ ဒီဗိုင်းရပ်​ ကို ကုသချက်​မှန်​မှန်​နဲ့ ကာကွယ်​နှိမ်​နင်း​ပေးနိုင်​ပါ​စေလို့ ဆု​တောင်းရမှာပဲ ။ ဒီစာကို ​ရေး​နေသူကြီးကလည်း အဲ့ဒိ ဗိုင်းရပ်​ ကူးစက်​ခံရသူကြီးပါလို့ ဆိုရင်​ ခင်​ဗျားတို့ မအံ့သြကြပါနဲ့ ။ ​နေ၀န်းနီ
2016 Mar 22 About naywoon ni
ကွန်ပျူတာကို ကူးစက်ရင်ဖြင့်.. ကြည့်ချင်ချင်မကြည့်ချင်ချင်… ကြည့်စေချင်တာတွေကြည့်ရတာပဲ..
အဲဟို.. ချွတ်ထားတဲ့ကောင်မလေးတွေပုံတွေ အပါအ၀င်ပေါ့…။
ကွန်ပျုတာကို ဗိုင်းရပ်ကိုက်လိုက်လို့ ပေါ်လာတယ်ပြောကြတာပဲ…
ဒြပ်မရှိ..ကိုက်တော့ ကိုက်တတ်သား..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 3663
naywoon ni says: အင်း​ပေါ့​လေ မြန်​မာပြည်​နဲ့ ကင်းကွာ​နေတာကြာပြီဆို​တော့ ​ပေါ့​ပေါ့​လေး ​ပြောနိုင်​ပြ်ီ​ပေါ့ သူကြီးရယ်​ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12402
ခင်ဇော် says: အာ့ဆွင် ဥနီမှာ
ကူးစက်ရောဂါဖစ်နေဘီ လို့ ဖွလိုက်တော့မီနော်,. ??
Thint Aye Yeik says: ဒါ ဥုံဖွ ပျောက်စေ ဘာညာသာလကာ ရွှီရွှမ် လုပ်တတ်တဲ့ ဘိုးတော်တွေ နတ်ကတော်တွေ ကုမှ ရမယ့် ရောဂါပဲ ဖြစ်မယ်
naywoon ni says: အဲ့ဘိုး​တော်​ နတ်​က​တော်​တင်​လား အကြားအမြင်​​တွေ​ကော တစ်​ချို့ ဘုန်းကြီး​တွေပါ အဲ့ဗိုင်းရပ်​ စွဲလို့ သင်္ကန်း​တွေ​ပေါင်​ဘာ​တွေ​ပေါင်​နဲ့ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike This solution has been deemed correct by the post author
အရင်ကကျော်စွာဦးကြီးမိုက် says: .၁လုံး၂လုံး ၃လုံး Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 6348
ယမကာကျော်စွာ အူးမြောက်မြောက် (B.E) says: နာကတော့ လောင်းစရာမရှိ အုနီကိုပဲ လေဖြတ်အောင်လောင်းမကွာ ဒါဘဲ